Umahluko kombono ngokomoya kunye nokucetyiswa ngokomoya
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Umahluko kombono ngokomoya kunye nokucetyiswa ngokomoya
Ngaba uyawazi umahluko phakathi umbono ngokomoya kunye nokucetyiswa ngokomoya?
zombini kuba yenye into efanayo kakhulu, ukuba xanisa ithe gqolo ukufumana, nokuba akazi umahluko, kodwa akukho nto efana inkathazo phaya phezulu, siye tentatively ukuhlaziya. Ngokomzekelo, xa ukusetyenziswa ezinjalo
ngomnxeba ithamsanqa amabali, yintoni na kungcono ingxaki yakho ukuba ucele oomoya ukujonga uluvo ingcali, ndicinga ukuba inceda ukuqinisekisa ukuba ngaba ngaphezulu ingcebiso ngokomoya ilungile.
umbono ngokomoya kunye nokucetyiswa ngokomoya kufuneka a izangoma
umbono ngokomoya kwakhona iingcebiso ezizezoMoya, iteknoloji esebenzisa izinto ezifana sixth sense of abaxeli-thamsanqa noosiyazi kufuneka izangoma . Njl okanye idluliselwe kwi-thethwano ukwamkelwa umyalezo ukusuka umoya umgcini, yinto Umzekelo woko.
umbono ngokomoya kwakhona iingcebiso ngokomoya kakuhle, nangona zombini kufuneka izangoma, oosiyazi ukuba sifeze umbono ezizezoMoya, yinto eyahlukileyo njenge khondo kwicandelo le umcebisi yokomoya yokwenza iingcebiso ngokomoya.
zombini isiqinisekiso ezizodwa asifuneki, kodwa zombini umsebenzi kukho umahluko omncinane. kubonakala
ukuba intlangano ※ ababenzayo uhlobo ukuqiniszekiswa kunye test, kodwa kubonakala ukuba kunokwenzeka abathi kumcebisi izangoma ngokomoya ngaphandle kwabo.
umahluko yeshishini umcebisi izangoma ngokomoya
ufumana umyalezo ovela zombini ihlabathi lomoya, nguye efanayo ukuthi kudlulisa kwaye kumbuzo, ngumsebenzi oosiyazi ukuba ukwenza uhlobo oluthile nokuphembelela inyathelo nxamnye nemimoya. Umzekelo, ezifana Nonhlanhla kunye Oharai, oko kukhululwa ukusuka Wraith-Dead yenye oosiyazi zamashishini.
umcebisi yokomoya ishishini ngokungqongqo ngexesha ukugqithisa umyalezo ovela kwelemimoya kumbuzo, ngumsebenzi wakho ukukhokela ulonwabo ezingxoxo ngako incoko. Snuggle ngokucebisana owathi, ukuphulaphula ibali, ngalo ibali, kukuba ndiza cofa emva kokubonisana leyo.
Nguwo lo ke umahluko ophambili phakathi umcebisi izangoma ngokomoya.
kufuneka bacelwe ukuba apreyizali nangoluphi nomcebisi izangoma ngokomoya
oko kufanelekile ukuba adibane naye nabani na iingxaki zakho, ndiyacinga ukuba ulahlekile kwiimeko ezininzi.
Ngokukhethekileyo, ukuba imimoya into xa kwafunyanwa ukuba ulime, xa kucacile ukuba ukubandezeleka kakuhle imimoya, okanye uthathwa ukuba babe yalo phezulu, na Nonhlanhla kunye Oharai uya kufuneka ngoko ke utyelele izangoma. abantu
ukuba imimoya abazi nokuba ingaba balihluthe, kodwa andazi ukuba imizekelo kamoya, ukuba akukho nto kodwa ingqondo olunjalo kubuhlungu, kwindawo umcebisi ngokomoya.
iyabuza ingakhangelwa nomcebisi ngokomoya, ukuze kubekho imimoya oko kunokubonwa ukuba ulime, ungacelwa ukuba uluvo yincutshe umhla kamva kwakhona izangoma.
Nonhlanhla kunye Oharai unako Psychic na, ngokuba kukho kwakhona ukuba ubanga umcebisi yokomoya ukuze kwandiswe ezingqonge umsebenzi, kwimeko enjalo, nibe nako adibane malunga Nonhlanhla kunye Oharai ngoko nangoko.
Ngoobani iinkathazo bakho ukuba yintoni na kufanelekile ukuba abonisane, ndiyacinga badla ebilahlekile.